Carlo Ungaro:-Kulanka Gooni u baxa saacado ka dib ayuu...................
wakiilka Dawlada Talyaaniyaha iyo Midawga Yurub ee shirka wadahadala Nabada Soomaalida ka socda Kenya Amb.Carlo Ungaro ayaa saakey shir Jaraaid ku qabtey xafiiska oo ku yaala dhismaha Riversaide Park oo ku yaala xaafada Westland ee Magaalada Nairobi,Kenya.
shirka Jaraa`id ayaa ku saabsanaa qabashada kulanka gooni u baxa ee hogaamiyayaasha siyaasada Soomaalida ee wadahadala nabada oo haatan ka socda Kenya.
kulanakan ayaa waxa uu ka dhici doonaa Xaafada Diana ee Magaalada Mombasa, carlo ungaro ayaa tirada dadka ka qayb galaya ku sheegay ogaantiisa ilaa 40-qof, waxaa kaloo uu sheegay in ay hogaamiyayasha soomaalida ee ku sugan madasha shirka qalad u fahmeen kulanakan oo ah mid ka dhaxeeya hogaamiyayaasha iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed ee maha kulanka hogaamiyayaasha oo kaliya.
waxaa kaloo uu sheegay inuu yahay wadatashi aayaha iyo mustaqbalka shacabka soomaaliyeed ,wada tashigan ayaa socon doona 10-berri ,ka dibna shirka waxa uu u gudbi doonaa wajiga 3-aad ee awood qaybsiga ayuu yiri ambasatorka.
mar aan weydiiyey rajada shirka ayaa wuxuu ii sheegay in 100/boqol kulana dhici rajadiisuna tahay mid aad iyo aad u wanaagsan.
mar uu kahadlayey Siyaasiyiinta maqan wax uu sheegay ugu danbeyn maanta in ay Nairobi soo gali doonaan,waxaa kaloo uu sheegay hogaamiyayasha ku sugan madasha in ay ogolaadeen in la qabto shirka, tirada dadka qayb galaya ka dib markii wadahadalo qaatey saacdo badan yeesheen Beesha caalamka ,IGAD iyo hogaamiyayaasha Soomaalida.
shirka jaraaid ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Mario Reffielli oo ah ninka bedeli doona Carlo ungaro bisha soo socota Feberuary oo gali doona hawl gab.
Nin Soomaali ah oo Lagu Diley Sweden
Cabdi Jaamac (Cabdi Tookiyo) ayaa u dhintay dhaawac ay u geysteen tuugo iyo nin kale ayaa isna lugu dhaawacay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.. Guji 8/1/4